AWOODA DHAQAALE: Halkan Ka Akhriso Shaxda 11-ka Xiddig Ee Ugu Qaalisan Abid Kubadda Cagta & Qiimaha Ay Ku Fadhido Oo Kooxo Goyn Lahaa. - Gool24.Net
AWOODA DHAQAALE: Halkan Ka Akhriso Shaxda 11-ka Xiddig Ee Ugu Qaalisan Abid Kubadda Cagta & Qiimaha Ay Ku Fadhido Oo Kooxo Goyn Lahaa.
March 29, 2019 Apdihakem Omer Adem
Haysashada 11-ka xiddig ee ugu qaalisan dunida kubadda cagta ayaa ah mid riyo u noqon lahayd tababare kasta oo haatan kubadda cagta ku dhex jira maadaama ay xiddigahaasi ku salaysan yihiin aduun dhan 1.159 BILYAN oo ah lacag kooxo goyn lahayd.
Xiddigo ay kamid yihiin Neymar, Cristiano Ronaldo iyo Paul Pogba ayaa dhammaantood kasoo muuqday sidoo kale daafaca ree France ee Lucas Hernandez kaas oo dhawaan 80 Milyan ugu wareegay Bayern Munich.
Lionel Messi oo shan jeer kusoo guuleystay abaalmarinta Ballon d’Or ayaan shaxdan ku jirin maadaama oo uu akaademiga Barca ee La Masia ugu soo biiray qaab xor ah isaga oo yar.
Xulka France ayaa ah midka xiddigaha ugu badan oo afar ah kuleh waxa soo raaca min laba ciyaartoy oo Dutch iyo Brazilian ah sidoo kale hal ciyaartou oo Colombian ah, Mid Portuguese ah iyo mid Spaniard ah.
Booskaas ayuu dhaxlay goolhayaha kooxda Chelsea ee Kepa Arrizabalaga kaas oo aduun lacageed oo dhan 62.5m kaga yimid dhinaca kooxda Athletic Bilbao.
Waxa hoggaaminaya daafaca Liverpool ee Virgil Van Dijk kaas oo 85m euros kaga soo hayaamay Southampton waxaana daafaca kula midaysan Lucas Hernandez oo Atletico kaga tagay 80m euros iyadoo uu saddexda daafac dhammaystiray Aymeric Laporte oo 65 Milyan kaga tagay Athletic Bilbao una wareegay dhinaca Man City.
Khadadka Dhexe Ee Shaxda
Philippe Coutinho ayaa ah xiddiga ugu horreeya kaas oo 120 Milyan oo 160 Milyan gaadhi karta kaga wareegay Liverpool kuna aaday Barcelona waxaana soo raaca Paul Pogba oo 105 Milyan kaga yimid Juventus sanadkii 2016 isla markaana usoo digo rogtay dhinaca Man United.
Khadka dhexe oo ay ku midoobeen afar ciyaartoy ayay Coutinho iyo Pogba soo raacaan Frankie De Jong iyo James Rodriguez oo labadaba min 75 Milyan lagula wareegay, De Ligt ayaa Ajax ka yimid kuna soo biiray Barca halka James uu Monaco kasoo hayaamay una yimid Real Madrid.
Weerarka ayaa ah mid holac ah waxaana hoggaaminaya xiddiga dunida ugu qaalisan ee Neymar JR kaas oo 222 milyan Euros kaga yimid Barcelona uguna wareegay dhinaca PSG.
Intaas ayuu soo raacaa isla Kylian Mbappe oo PSG ka tirsan maadaama heshiiskii uu kaga yimid Monaco kuna yimid caasimada Paris uu ahaa mid ku kacay 135 Milyan euros.
Ugu dambayn, Xiddiga saddexleyda weerarka ah dhammaystiray ayaa ah Cristiano Ronaldo kaas oo ku galay heshiiskii xagaaga ee uu 117 Milyan kaga tagay Real Madrid uguna wareegay dhinaca Juventus.
Xiddigaha keydka ee shaxdan.
Xiddigaha keydka ayuu hoggaaminayaa Ousmane Dembele oo 105 kaga yimid Dortmund uguna wareegay Barca sidoo kale heshiiskii 101 Milyan euros ka ahaa ee Gareth Bale uu kaga soo dhaqaaqay Tottenham uguna wareegay Real Madrid, 90 Milyan ee Gonzalo Higuain, min 75-kii Milyan ee Zidane iyo Di Maria, 58-kii Milyan ee Mendy iyo 62-kii Milyan ee Alisson Becker.
Halkan Ka Fiirso Shaxda Oo SAWIR Ah